.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Reply For You
သူငယ်ချင်းများအားလုံး မင်္ဂလာပါနော်.. ဒီနေ့တော့ ကျွန်တော့်ဆီကို အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ဆက်သွယ်ကြတဲ့သူတွေကို
လိုအပ်ရင် ပြန်ပြောဖို့ ဒီစာမျက်နှာလေး လုပ်လိုက်ပါတယ်။ အဓိက ဆိုဒ်မှာ တင်ထားတဲ့ ပို့စ်တွေနဲ့ ပက်သက်ပြီးတော့
ကျွန်တော့်ကို ပြောလာတာလေးတွေရယ် တစ်ခြား အကြောင်း ကိစ္စတွေနဲ့ မေးမြန်း ပြောဆိုထားတာလေးတွေကိုရော
ဒီနေရာလေးမှာ ပြန်ဖြေပေးပါမယ်။ ခုလာလောဆယ်တော့ အနော်ပြောစရာလေးတစ်ခု ရှိတယ်။ Mp3 သီချင်းလေးတွေ
လာနားထောင်တဲ့ ၊ ဒေါင်းယူကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ချို့ တင်ပေးထားပြီးသား သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို ၅ ခါ ၆ ခါလောက်အထိ
ထပ်ထပ်တောင်းနေကြလို့ပါ။ အဲဒီကိစ္စနဲ့ ပက်သက်ပြီး Mp3 သီချင်းများ တောင်းဆိုရန် နေရာမှာ ပြောထားပြီးသားပါ။
သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို ၂ ခါမတောင်းဖို့နဲ့ တင်ထားပြီးသား သီချင်းကို ထပ်မတောင်းဖို့။ သေသေချာချာ ရှာကြည့်ဖို့ပါ။
ခုအနော့်ဆိုဒ်မှာ Mp3 သီချင်းတွေကို တင်ပေးထားတာ ၂ မျက်နှာ ရှိပါတယ်။ တစ်မျက်နှာကို အပုဒ် ၁၅၀ စီတင်မှာပါ။
ပြည့်သွားရင် နောက်ထပ် စာမျက်နှာ တစ်ခု ထပ်လုပ်ပြီး တင်ပေးပါမယ်။ နောက်ရက်ကျရင် ဓမ္မတေးတွေ တင်ဖို့လည်း
လုပ်နေပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတို့ လိုချင်တဲ့ ၊ နားထောင်ချင်တဲ့ သီချင်းလေးတွေ ရှိရင်လည်း တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်နော်။
ခုတလော တင်ထားပြီးသား သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို ခဏခဏ ထပ်တောင်းနေတာရှိတယ် ။ Nine One နဲ့ နီနီခင်ဇော်တို့
ဆိုထားတဲ့ အရောင်မဆိုးနဲ့ ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးပါ။ Mp3 သီချင်းများ ဒေါင်းရန် ၂ က နံပါတ် 11 မှာ ရှိပါတယ်လို့..။
တင်ပေးထားတာ တော်တော် ကြာပါပြီ။ ( နောက်တစ်ခါ တင်ပေးထားပြီးသားကို ထပ်တောင်းရင် ပြန်မပြောပါဘူး.. )
မေးထားတာလေးတွေကိုတော့ နောက်နေ့မှ ပြန်ဖြေပေးပါတော့မယ်။ မကြာမီ လာမည်မျှော်........
Posted by Thurainlin at 10:40
Labels: Reply For You, အသိပေးခြင်း